Manatsara ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina sy fizahantany i Shina sy i Zambia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manatsara ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina sy fizahantany i Shina sy i Zambia
Zambia sy Shina, tamin'ny sabotsy, dia nanamafy ny fahavononany hampiroborobo ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina sy fizahan-tany.
Ireo firenena roa ireo dia nanolo-tena nandritra ny fampisehoana ara-kolontsaina, nataon'ny Jilin Art Troupe, ho ampahany amin'ny fankalazana ny Taom-baovao Sinoa.
Richard Musukwa, minisitry ny fizahantany sy zava-kanto ao Zambia, dia nilaza fa manome lanja ny lanjan'ny kolontsaina ny firenena afrikanina atsimo ary maniry hianatra amin'ny kolontsain'ny firenena hafa toa an'i Sina.
Zambia, hoy izy, dia mankasitraka ny fanampiana azony avy any Shina, amin'ny fifanakalozana kolontsaina, izay nanatsara ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny firenena roa tonta tao anatin'ny 55 taona lasa.
Li Jie, masoivoho sinoa any Zambia, dia nanaiky ny fifandraisana roa tonta nandritra ny taona maro, ary nanampy fa ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina koa dia nandray anjara tamin'ny fanatsarana ny fifandraisana.
Mpianatra 10,000 4,000 any Zambia mianatra ny teny sinoa amin'izao fotoana izao. Mpianatra Zambiana XNUMX no mianatra any amin'ny oniversite isan-karazany any Shina.
Nandehandeha tao amin'ny FITUR ny fizahantany Sierra Leone mba hisarihana mpitsidika Espaniola
Ny trano fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa dia mitarika amin'ny fanandramana fahombiazan'ny vahiny